Nagu saabsan - Dongguan Shao Hong Electronics Technology Co., Ltd.
Dongguan Shaohong Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd. waxay ku taalaa Tangxia Town, Dongguan City, oo leh gaadiid aad u sahlan. Waxay 30 kiiloomitir u jirtaa Madaarka Caalamiga ah ee Bao'an, 30 kiiloomitirna waxay u jirtaa Shenzhen Bay Port, 38 kiiloomitir waxay u jirtaa Port Shenzhen Yantian, iyo 53km oo ka fog Garoonka Caalamiga ee Hong Kong.
Waxaa la aasaasay 2017, waa isku-darka R & D, wax soo saarka iyo iibinta ganacsiga tikniyoolajiyad sare. Waxay inta badan ku hawlan tahay foornooyinka shirarka, mashiinnada kaladuwan ee hawlo badan, makiinado badan oo wax lagu karsado, dheriga korontada ku shaqeeya, biyo-bixiyeyaasha, mashiinnada kafeega, sameynta jalaatada, iyo soosaarida iyo iibinta qalabka guryaha. Waxaan haynaa koox khibrad u leh R & D, oo ka socota horumarinta wax soo saarka, naqshadeynta, xaqiijinta, wax soo saarka ballaaran; waxaan ku bixin karnaa adeegyo tayo sare leh dhammaan. Dhanka kale, waxaan leenahay xarumo horumarsan iyo khadadka wax soo saarka otomaatiga ah, si loo qaado noocyada ODM ama mashaariicda OEM ee qalabka jikada iyo qalabka biyaha la cabbo.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku adkayd ilaalinta tayada. Waxaan si adag u xakameynaa tayada marka la eego xakamaynta alaabta ceeriin, xakamaynta habka wax soo saarka, iyo kormeerka alaabada hore. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale dhignay fikradda ah "u adeegidda macaamiisha ayaa horumarineysa nafteena", oo looga baahan yahay shaqaalaha ganacsiga iyo macaamiisha u adeega inay ka jawaabaan emaylka iyo weydiimaha macaamiisha si habboon oo ku habboon, isla markaana aan dabagalno weydiimaha macaamiisha inta hawshu socoto, iyo ilaali xiriirka macaamiisha iyo fahamka iibka macaamiisha xitaa kadib rarka, runti qanci macaamiisha oo u oggolow macaamiisha inay na doortaan.
5taan sano, waxaan u dhoofinay in kabadan 60 dal iyo gobal sida Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska, Japan, Talyaaniga, Spain, Poland, iyo Ruushka; Dhanka kale, waxaan la shaqeynay noocyo kale oo caan ah oo caan ah adduunka. Alaabooyinka ayaa sidoo kale si aqlabiyad leh u aqoonsadeen macaamiil badan.
Waxaan uqalminay ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, QC080000: 2017 (maareynta walxaha halista ah) iyo OHSAS18001 (caafimaadka iyo badbaadada shaqada), ISO22000 (shahaadada nidaamka maareynta amniga cuntada). Wax soo saarkayaga ayaa loo hoggaansamay Shiinaha 3C, Waqooyiga Ameerika UL, CUL, European TUV / GS, CE, South Korea KC, Japan JET, shahaadooyinka kale ee IEC ee CB. Badeecad kasta waxay soo martay baaritaan adag iyo tijaabooyin tayo leh. Kuwani waa dammaanadaha wanaagsan ee loogu talagalay awooddeena inaan ugu adeegno macaamiisha ajnebiga ah ee waaweyn, kuwa wax soo dejiya, ganacsatada waaweyn, iyo kuwa wax iibiya.
Waxaan had iyo jeer taageernaa "Tayada Koowaad, Hal-abuurnimo iyo Horumar, iyo Win-win with Macaamiisha" falsafadda ganacsiga, annaga oo si joogto ah u raadineyna horumarka tikniyoolajiyadda, si isdaba-joog ah u cusbooneysiineyna, isla markaana u siineyno macaamiisha wax soo saar iyo adeegyo heer sare ah.
Mustaqbalka, dadaallada wadajirka ah ee dhammaan asxaabta Shaohong, waan sii xoogeysaneynaa oo waan fiicnaan doonnaa, horay ayaan usii socon doonnaa, waxaanan u duuli doonnaa meel sare.